Iindaba -I-H & M yazisa ngezisombululo zokupakisha ezizinzileyo
I-H & M yazisa ngezisombululo zokupakisha ezizinzileyo
Iqela le-H & M, inkampani yaseSweden yamazwe ngamazwe yokuthengisa iimpahla, iazise inkqubo entsha yokupakisha iphepha enokusetyenziswa kwakhona kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe. Ngokuthenga kwi-Intanethi kukhula kwihlabathi liphela kwaye ngaloo nkunkuma yeplastiki, i-H & M iziva isidingo sokufumana isisombululo sokupakisha okuzinzileyo. Injongo yesi sisombululo sitsha kukunciphisa umngcipheko wokudala inkunkuma.
“NgeVeki eNtsundu isemva kwethu kwaye iiholide zisondele, ukuthenga kwi-Intanethi kufikelele encotsheni. Kwaye ngenxa yobhubhane othathe lo nyaka, kukhuselekile ukuthi i-e-commerce itshintshe unaphakade. Kodwa ngelixa ii-odolo ezikwi-Intanethi zikhula njengokuhamba ngokubanzi kwehlabathi, injalo nenkunkuma yokupakisha. Uninzi lwayo yiplastiki ephelela ekulahlweni komhlaba okanye elwandle, inefuthe elibi kakhulu kwiplanethi yethu, ”i-H & M Group yatsho kwingxelo yemithombo yeendaba.
Kwimveliso yefashoni, iplastiki yenye yemiceli mngeni emikhulu. Ayisetyenziswanga kuphela kwizinto zokwenziwa ezinjengepolyester, kodwa nakwiihanger, ukuxhoma iithegi, iibhegi zokuthenga ezizodwa kunye neebhegi ezininzi. Xa kufikwa ekupakisheni, iplastiki ngokuyinxenye isetyenziselwa ukukhusela iimveliso ezithile kunye nokuthintela inkunkuma, nto leyo eyenza kube nzima nangakumbi ukuyitshintsha. Umbuzo ngulo: Singakuthintela njani ukupakishwa ekubeni yinkcitho ngokwayo kwaye kwangaxeshanye sihambise iimveliso ezikumgangatho ophezulu?
Kumaziko alo okuhambisa eNetherlands, e-UK, eSweden, e-China, e-Russia nase-Australia, izigidi zeephakeji zithunyelwe kubathengi njengenxalenye yovavanyo lwezisombululo zokupakisha ezizinzileyo. Ukukhuthazwa liqhinga lokupakisha kunye nokuba ube ngumbutho ojikeleze ngokupheleleyo, iQela le-H & M liphuhlise inkqubo yokupakisha emininzi eneengxowa ezenziwe ngephepha eliqinisekisiweyo. Nje ukuba zivulwe, iingxowa ziyavuselelwa.
Ngaphezulu koko, iilebheli zokufaka uphawu ngoku zivumela iimveliso zeqela ukuba zibaluleke ngakumbi kwimiyalezo, ngelixa iibhegi zinokubonakala okucocekileyo kwaye okuhle. Oku kuthintela iiphakheji ezinemiyalezo ephelelwe lixesha kuzo, ukuthintela omnye umngcipheko wenkunkuma.
“Sazisa uhlobo lwempahla olungcono kumthengi nakwindalo esingqongileyo. Okwangoku kufuneka iphuculwe kuba kufuneka siqhubeke nokusebenza ngokubuyisela ukusetyenziswa kweplastiki kulo lonke unikezelo lwezixhobo. Kodwa ngokwazisa oku kupakishwa kweempawu ezininzi ezininzi senza impembelelo enkulu ngokutshintsha iplastikhi yangaphandle ngesisombululo sephepha. Eli linyathelo elincinci kuhambo olude, ”utshilo uHanna Lumikero, umnini-nkonzo kunye noxanduva lwenkqubo entsha yokupakisha kwiH & M Group.
Ukuza kuthi ga ngoku, isisombululo esitsha sokupakisha saziswa kubathengi kwiCOS, ARKET, Monki kunye nosuku lweveki. Uphawu lweH & M sele luqalisile ukulusebenzisa kwiimarike ezikhethiweyo, kwaye oku kuyonyuka kuphela kwiinyanga ezizayo kwaye, ukufikelela kwiqela elikhulu labathengi kwihlabathi liphela. Ekuqaleni kuka-2021, uphawu kunye namanye aMabali aza kujoyina uhambo lwethu kwaye athumele iiodolo zabo ezikwi-Intanethi ekuphindaphindweni kwephepha.
"Sisebenzisa igalelo elibalulekileyo elivela kubathengi bethu ukuphucula kwaye siyazi ukuba bayavuya kukufumana iiodolo zabo kwiipakethe ezizinzileyo. Kwangelo xesha, sizibophelele ekunciphiseni iplastiki kulo lonke ishishini lethu kunye nexabiso lokudibanisa. Yiyo loo nto sizakusebenzisa esi sisombululo sokupakisha kuzo zonke iimveliso zethu, ”utshilo uLumikero.
Isisombululo sokupakisha siza kunceda amaQela e-H & M ekufikeleleni kwiinjongo zesicwangciso sayo setyhula sokupakisha, kubandakanya ukunciphisa ukupakishwa ngeepesenti ezingama-25 kunye nokuyila ukuphinda kusetyenziselwe ukuphinda kusetyenziswe, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona okanye ukuchumisa ngomgquba ngo-2025. Iinjongo zilungelelaniswe ne-Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy Global Commitment, kunye neFact Pact kunye ne-Canopy's pack Pack4Good, kwaye zikhokelele kwiqela le-H & M lisusa uninzi lweebhegi zazo zokuthenga zeplastikhi kwiivenkile zeemveliso, endaweni yoko kukhethwe iphepha eliqinisekisiweyo. . Kunye namanye amanyathelo, oku kube negalelo ekunciphiseni ipesenti yeepesenti ze-4.7 kwiiplastiki ngo-2019, ezingaphezulu kwe-1 000 yeetoni zeplastiki. Ngokufezekisa umlinganiso omtsha wokupakisha, iqela le-H & M lisondela kufikelela kwezi njongo.
Ixesha Post: Feb-05-2021